यो शक्रवार निलो चन्द्रमा उदाउँने ! - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १५ श्रावण २०७२, शुक्रबार ०६:१७ |
एजेन्सी । शुक्रवार राति निलो चन्द्रामा उदाउँदैछ । सन् २०१२ पछि शुक्रवार निलो रंगको चन्द्रमा देखिन लागेको हो । एउटै महिनामा दुईवटा पूर्णिमा हुने वेला निलो चन्द्रमा देखिने खगोलविद्हरु बताउँछन् । यो वर्षको जुलाई महिनामा दुई वटा पूर्णिमा परेको हो । जुलाई २ मा पहिलो पूर्णिमा परेको थियो भने शुक्रवार जुलाई ३१ मा फेरि अर्को पूर्णिमा परेको छ । यस्तो दुर्लभ संयोग अब सन् २०१८ मा मात्र हुनेछ । अर्थात हरेक ३ वर्षको अन्तरमा यस्तो संयोग पर्दछ ।
पछिल्लो पटक सन् २०१२ को अगष्ट ३१ मा निलो चन्द्रमा लागेको थियो । त्यो वर्ष अगष्ट २ र ३१ मा पूर्णिमा परेको थियो । अब तीन वर्ष पछि सन् २०१८ को दुई वटा महिनामा निलो चन्द्रामा देखिने छ । उक्त वर्षको जनवरी र मार्च महिनामा यस्तो संयोग जुर्नेछ ।
अग्रेजीमा ब्लुमुन भनिए पनि शुक्रवार उदाउँने चन्द्रमाको रंग साँच्चिकै निलो हुने भने होइन । यसलाई बोलीचालीमा मात्र ब्लुमुन अर्थात निलो चन्द्र भनिएको हो । त्यसो त यस्तो अवस्थामा लाग्ने चन्द्रमाको रंगमा निलोको मात्रा भने बढी हुने गर्दछ ।
Previousमन्त्रीलाई खुशी पार्न नसकेपछि नम्रताको अवार्ड खोसियो !
Nextक्यानडा र अष्ट्रेलिया पठाउने नाममा ठगी गर्ने पास्टर पक्राउ
सविंधानसभा छोड्दिन : दाहाल
४ चैत्र २०७१, बुधबार १०:०२
अब हप्तामा ९ घण्टा मात्रै लोडसेडिङ
२५ चैत्र २०७२, बिहीबार १६:२०